वातावरण प्रदुषण नगर्ने गरी काम अघि बढाउनुः सचिव ठाकुर | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
वातावरण प्रदुषण नगर्ने गरी काम अघि बढाउनुः सचिव ठाकुर
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानीे आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले काठमाडौं उपत्यकामा अझै ३ किलोमिटर सडक क्षेत्रमा पाइप विछ्याउने काम वाँकि रहेको जनाएको छ ।
हालसम्ममा ६ सय ४० किमी सडक खण्डमा खानेपानीको पाइपविछ्याउने काम सम्पन्न भइसकेको निर्देशनालयले आज खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा पत्रकारहरुलाई जानकारी गराएको हो । खानेपानीका पाइपहरु विछ्याउने निर्माण व्यवसायीहरुले कुनै कुनै क्षेत्रमा समयमै काम अघि नबढाउँदा काठमाडौंमा प्रदुषण बढेकोमा चिन्ता समेत व्यक्त गरिएको थियो ।
सडक क्षेत्रमा खानेपानीका पाइपहरु विछ्याउन खनिएका ठाउमा सयममै पिच गर्न केहि प्राविधिक कडिनाइका कारण पनि अहिले उपत्यकामा धुलोको मात्रा बढेको हो । यसरी कच्चीमा परिणत भएका सडकमा सवारी साधन गुड्दा ठुलो मात्रामा धुलो उड्ने भएको हुनाले पनि धुलो धुवा बढ्न गएको पनि सहभागिहरुले पत्रकारहरुलाई जानकारी गराएका थिए ।
ठेकेदारहरूले भने रातको समयमा तापक्रम न्यून मात्रामा आउने गरेका कारण पिच गर्न कठिनाई भइरहेको बताएका छन् । शर्मा एण्ड कम्पनीका प्रमुख रमेश शर्मा भन्छन्, ‘ दिउसोको समयमा पिच गर्न ट्राफिकका कारण मिल्दैन राती चिसोले गर्दा मिलेको छैन, माघ १५ पछि पिच सुरु गर्ने योजनामा छौं,’
आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक तिरेश प्रसाद खत्री मेलम्ची आउनुअघि नै पाइप विछ्याउने काम सम्पन्न भई खानिएका सडकहरुमा कालो पत्रे गरिसकिने दावी गरेका छन । मेलम्चीको पानी मेलम्ची आयोजनाले सुन्दरीलजमा खसालेको ६ महिनामा काठमाडौं उपत्यकावासीका घरका धारामा पानी वितरण गरिसकिने समेत खत्रीले दावी गरेका छन ।
पुरानो बानेश्वर, कोटेश्वर जस्ता क्षेत्रमा ठुलो मात्रामा धुलो उड्ने गरेको छ । जहाँ आयोजनाले खनेको बाटो अहिलेसम्म पिच गरिएको छैन । अझै काम बाँकी रहेका कारण करीब १ महिनासम्म पिच गर्न नमिल्ने बताएको छ ।
९० प्रतिशत स्थानमा आयोजनाले पाइप बिच्छ्याएर सकेको छ । अझै १० प्रतिशतमा भने आयोजनाले काम गर्न रहेको समेत आयोजित कार्यक्रममा बताइएको थियो ।
खानेपानी मन्त्रालयले आयोजना गरेको एक पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुरले वातावरण प्रदुषण नगरि काम अघि बढाउन मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस दाहाललाई आफ्नैको दबाब, तनाब छल्न छैठौँ पटक सुकुटेमा !
उनले भने ‘आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले वातावरण प्रदुषण नगर्ने गरी काम अघि बढाउन अहिले नै निर्देशन दिएको छु,’ उनले समयमै पिच गर्ने काम पनि अघि बढाउनसमेत निर्देशन दिएको बताए । मन्त्रालयको पहलमा खानेपानी आयोजना निर्देशनालयले निर्माण व्यवसायी र पत्रकारहरु वीच अन्तरक्रिया आयोजना गरेका थियो ।
२६,पुष.२०७४,बुधबार १९:४९ मा प्रकाशित
← महाकाली कोरिडोर निर्माण अवरुद्ध, विस्फोटक पदार्थको अभावले निर्माण अवरोध !
डिजिटल प्रविधिबाट जग्गाको कित्ताकाट: एक इन्चपनि तलमाथि नहुने, आकाशमा घाम लागेको बेला नक्साको फाइल खोज्नुनपर्ने ! →